ကယားပြည်နယ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် Caravan ခရီးစဉ် စေလွှတ်ပွဲ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ရင်ပြင? - Yangon Media Group
ကယားပြည်နယ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် Caravan ခရီးစဉ် စေလွှတ်ပွဲ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ရင်ပြင?
မြန်မာနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်ပြုလုပ်နေသည့် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ခရီးစဉ်များသည် နိုင်ငံ့စီးပွား ရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးနှင့် နိုင်ငံ၏အခြေအနေမှန်အားလုံးပျံ့ နှံ့နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွား လာရေးဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ဦးတင့်သွင်ကပြောသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး ဒီထက်ပိုကောင်းမွန်လာဖို့အတွက် ခရီးသွားကဏ္ဍဟာအဓိကကျတဲ့ မောင်းနှင်အားဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နဲ့နယ် စပ်ဖြတ်ကျော်တဲ့ ခရီးစဉ်အများ အပြားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာနိုင်ငံအတွက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရော နိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေမှန်တွေအားလုံးကိုပါ တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှ စတင်တာထွက်သည့် ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်-ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဟောင်ဆောင်နှင့်ပိုင်မြို့များသို့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် Caravan ခရီးစဉ်တာလွှတ်ပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်ဦးတင့်သွင်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကျ ဆင်းနေခြင်း၊ ခရီးသွားဧည့်သည်များလည်ပတ်မှုကျဆင်းလာစေသည့် စသည့်သတင်းများအားချေ ဖျက်နိုင်ရန်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည် ဦးမော့လာနိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့်နီးစပ်နေသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြားအပြန်အလှန်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်များဖြစ်ပေါ်စေ ရန် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား One belt One Road ခရီး စဉ်အစီအစဉ်အရ တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များ ဖြင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီယက်နမ်လမ်း ကြောင်းသည်လည်း ပွင့်လင်းနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာ၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား နှင့်ထိုင်းအစရှိသောနယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ခရီးစဉ်များလည်းအနာဂတ် တွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးတင့်သွင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင် မောင်စိုးက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမှုရေးတိုးတက်မှုတို့သည် မိမိတို့ နိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များပေါ်တွင်မူ တည်သည့်အတွက် ခရီးသွားလုပ် ငန်းကဏ္ဍမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံအချင်း ချင်းရိုးရာပွဲတော်များ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ပွဲတော်များတိုးတက်လာ စေရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောသည်။ ”အမြင်ရှိရင်မဆင်းရဲတော့ဘူး။ လူတစ်ယောက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ အမြင်မရှိလို့။ အမြင်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းပါဝင် တာဖြစ်လို့အားပေးပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများအကြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခရီးစဉ်များစွာဖြစ်ပေါ်လာသည် နှင့်အမျှ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ခရီးစဉ် ဒေသရှိသူများအတွက် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာ မည်ဖြစ်သည့်အတွက် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ယာဉ်တန်းခရီးစဉ်များပိုမို ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် နယ်စပ်တစ် လျှောက်ရှိ ပြည်နယ်အစိုးရများအ နေဖြင့် ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်နိုင် ရေးကို ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်တွန်းပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လတ်တလောခရီးသွားကဏ္ဍ အခြေအနေအရမူ ယခုနှစ်အတွင်း အနောက်နိုင်ငံသားခရီးသွား ဧည့်သည်များဝင်ရောက်လည်ပတ်မှု အနည်းငယ်ကျဆင်းနေကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းမှသိရသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ခြင်း မပြုတဲ့ Kelly Osbourne
ရေလှောင်တမံ ၃၆ ခုမှ ရေပိုလွှဲများ ရေကျော်နေ
မြဝတီမြို့၌ ယာဉ်ကြော ကျပ်တည်းမှုများ လျော့နည်းစေရန် မြို့တွင်းလမ်း အချို့တွင် တစ်လမ်းမောင??
ခြေဥပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကိုးကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲ
စားသုံးရန် မသင့်သည့် သက်တမ်းလွန် ဆေးဝါးများနှင့် အစားအသောက်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီး